Antontan'isa 5 manaporofo ny fitaovan'ny mpivarotra finday dia manatsara ny fahombiazany. Martech Zone
Niara-niasa tamin'ny sehatra fampandehanana varotra finday sy fampiharana takelaka takelaka finday izahay mba hanampiana azy ireo amin'ny ezak'izy ireo miditra. Teknolojia miavaka izy io izay nanana fitomboana miavaka tamin'ny taona lasa.
Ny mpandraharaha varotra dia reraky ny fikarohana sy ny fikaroham-bola ho an'ny varotra, reraky ny fijanonana eo amin'ny famokarana marketing sy ny filan'ny varotra, reraky ny fidiran'ny angon-drakitra rehefa nandefa ilay antoka tamin'ilay vinavina izy ireo. FatStax dia manasongadina ny antoka rehetra an'ny mpanelanelana sy karazana rehetra ao anaty sehatra an-tserasera na ivelan'ny Internet izay azon'ny mpiasan'ny varotra ataonao avy amin'ny iPad na iPhone.
Vao tsy ela akory izay, ny solontenan'ny mpivarotra iray dia nizara ny fomba nisehoany tamin'ny efitrano fampiratiana an'ny mpanjifa izay tsy misy efitrano fandraisam-bahiny, tsy misy projecteur na Internet. Talohan'ny FatStax dia tsy maintsy namerina nanamboatra na namindra ny fivoriana izy. Fa kosa, nongotany ny fampiharana azy ireo tamin'ny iPad-ny, nizara horonan-tsary, nandefa ny antoka tamin'ny alàlan'ny fampiharana, ary niteraka fanentanana hikolokoloana tamin'ny alàlan'ny CRM sy ny fampidirana automatique marketing azy ireo. Namidy.
Ny fisondrotana ny fahombiazan'ny varotra dia tsy voafetra amin'ny FatStax. Ny fitaovana fivarotana finday dia manova ny fizotry ny varotra ary manome vahana sy manafaingana ny varotra amin'ireo orinasa manaparitaka azy ireo. Saika eo noho eo ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola:
60% -n'ny ekipa mpivarotra be asa dia a fampiharana #sales finday, fampisehoana avo roa heny
70% of # Mobile-azo atao #sales ekipa mitatitra fiverenana tsara amin'ny fampiasam-bolany
83% -n'ny mpivarotra no miteny fitaovana fivarotana finday ataovy toy ny sisiny ny orinasan'izy ireo
Hisy fiakarana 125% ao fampiasana fampiharana fivarotana finday amin'ny 2 taona ho avy
Mpanararaotra ambony mampiasa teknolojia fivarotana finday Avo 3 heny noho ny mpanao ambany asa ambany
Zahao ny infographic feno izay manaporofo ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana fivarotana finday.
Tags: fatstaxvarotra findayfahombiazan'ny varotra findayfitaovana fivarotana findayfivarotana fitaovana
Dec 22, 2015 amin'ny 4: 46 AM
Maniry aho raha navela hiasa ora maro kokoa, ary homena fitaovana bebe kokoa hahazoana varotra bebe kokoa, saingy azoko tsara ny fihenan'ny tetibola. Hanandrana ireo fitaovana ireo anefa